ကြှနျမတို့ရဲ့ ခရီးစဉျ - Owl Myanmar News
OM | April 18, 2021 | Insect | No Comments
ကြှနျမက ဆိုရှယျကတြဲ့မိနျးကလေးတဈယောကျပါ။ ဒါကိုလညျး ဖုနျးကှယျမထားပါဘူး။ မောငျနဲ့ လကျထပျပွီးနောကျမှာလဲ ယောကျကြားလေး သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ပြျောပြျောပါးပါး စစနောကျနောကျ သှားသှားလာလာပါပဲ။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောရရငျ ယောကျကြားလေးတှနေဲ့ ပလူးပလဲနတေတျတယျပေါ့။ အဲလိုနရေတာကို ကြှနျမ ကွိုကျတယျ။ ကြှနျမ အဲဒီလိုနတေတျတာကို မောငျကသိပါတယျ။ သူ့အတှကျ ဘာမှ ပွဿနာမရှိဘူးဆိုတာလဲ ကြှနျမသိတယျ။ မောငျနဲ့လကျထပျပွီးနောကျ ကြှနျမ အိမျထောငျရေး ဖောကျပွနျဖို့ဆိုတာ စိတျတောငျ မကူးဖူးပမေယျ့လညျး ကြှနျမမှာ လိငျနဲ့ပတျသကျပွီး ထူးခွားတဲ့ စိတျကူးယဉျစှဲလနျးမှုတှေ ရှိနပေါတယျ။ အိမျထောကျကပြွီးနောကျ ၂ နှဈလောကျနတေော့ ကြှနျမနဲ့ အမြိုးသားနဲ့ ငပလီကို ရုံးပိတျရကျရှညျ သှားလညျကွတယျ။ ကိုနလေငျးဆိုတဲ့အမြိုးသားနဲ့ လယောဉျပျေါမှာခုံတနျးတဈခုထဲကပြွီး အပနျးဖွရေိပျသာ ကလာကွိုတဲ့ ကားနဲ့လညျး အတူတူစီးခဲ့တော့ သူနဲ့ ကြှနျမတို့လငျမယားနဲ့ အပွနျအလှနျ ပွုံးပွနှုတျဆကျပွီး စကားစမွညျ နညျးနညျးပွောဖွဈခဲ့တယျ။
နောကျရကျမှာ လငျမယားနှဈယောကျ အပနျးဖွရေိပျသာ က ရကေူးကနျဘေးက လှတျတဲ့ ခုံတနျးမှာ သှားထိုငျကွတော့ ကြှနျမတို့ရှကေ့ ခုံတနျးမှာ ယောကျကြားတဈယောကျ မကျြနှာပျေါ စာအုပျတငျပွီး စာဖတျရငျး အိပျပြျောနပေုံရပါတယျ။ လယောဉျအတူစီးလာတဲ့ ကိုနလေငျး ပါပဲ။ ရကေူးဘောငျးဘီ အတိုလေးပဲဝတျထားတဲ့ သူခန်ဓာကိုယျဟာ အသားလတျလတျ ကွှကျသားအဖုအထဈမြားနဲ့ ယောကျကြားပီသစှာ စှဲဆောငျမှုရှိလှနျးလှပါတယျ။ ကြှနျမကို ရငျခုနျစတောကတော့ အနီးကပျမွငျနရေတဲ့ သူ့ရဲ့ ရကေူးဘောငျးဘီအောကျက ဖုဖောငျးနတေဲ့နရောပါပဲ။ ကြှနျမသတိလကျလှတျပဲ သူ့ရဲ့ ဖုဖောငျးနတေဲ့ ပေါငျကွားကို အတနျကွာ ငေးကွညျ့နမေိတယျ။ ရကေူးဘောငျးဘီရဲ့ ဖုဖေါငျးနတေဲ့ နရောအောကျမှာ တျောတျောထှားကြိုငျးတဲ့ လီးကွီး ရှိတယျဆိုတာ အသအေခြာပါပဲ။ မောငျနဲ့အတူ ထိုငျပွီး စကားပွောနရေငျးလဲ ကိုနလေငျးရဲ့ ဖုဖောငျးနတေဲ့နရောကို မကွာမကွာ ခိုးကွညျ့နမေိတယျ။
ခဏနတေော့ ကိုနလေငျးနိုးလာပါတယျ။ ကြှနျမတို့လငျမယားနဲ့ သူနဲ့ စကားစမွညျ ထပျပွောဖွဈကွပွီး ဖုနျးနံပါတျ အပွနျအလှနျယူ၊ ဖဘှေ့တျ အကောငျ့တှပေါ အပွနျအလှနျ အပျဈ လိုကျကွပါတယျ။ သူ့ ဖဘှေ့တျ အကောငျ့ကို ကြှနျမဝငျပွီး စပျစုမိတော့ သူ့အသကျက ၃၀ လောကျ ကြှနျမထကျ ၄ နှဈလောကျကွီးတယျ။ အိမျထောငျကှဲထားတာ မကွာသေးဘူး။ ငပလီကို စိတျပွလေကျပြောကျ အနားယူဖို့ ထှကျလာတဲ့ သဘောရှိတယျ။ ဒီ အပနျးဖွရေိပျသာ က သူ့မိတျဆှေ ပိုငျတာဆိုတော့ ခဏခဏလာလညျတတျပုံလညျး ရတယျ။ သူ့အခနျးကလညျး ကြှနျမတို့ အခနျးနဲ့ သိပျမဝေးဘူး။ ထုံးစံအတိုငျး ကြှနျမလညျး ကိုနလေငျးနဲ့ ခငျခငျမငျမငျ ဖွဈပွီးနောကျပိုငျး အတူထိုငျရငျး ကြှနျမက ကိုနလေငျးပေါငျကို ပုတျတာ ကိုနလေငျးက ကြှနျမပခုံးကို လာကိုငျတာမြိုးတှေ ရှိလာပါတယျ။
ဒီလို ပလူးပလဲလုပျရတာမြိုးကို ကြှနျမသာယာတာတော့ အမှနျပဲ။ ကိုနလေငျးကွညျ့ရတာလဲ ဇသေးတဲ့သူတော့ မဟုတျမယျ့ပုံပဲ။ တဈညမှာ မောငျနဲ့ လငျမယားအတူနကွေတယျ။ လိုးကွတယျပေါ့နျော။ မောငျသုတျလှတျပွီးသှားတော့ အိပျယာပျေါမှာပဲ စကားပွောနတေုနျး ကြှနျမ မမြှျောလငျ့ထားတာကို မောငျကပွောလာတယျ။ ရကေူးကနျဘေးမှာ ကိုနလေငျးရဲ့ လီးကွီးကို ကြှနျမ ငေးကွညျ့နတော သူမွငျတယျတဲ့။ ကွကျသသေပွေီး အကွာကွီးကွညျ့နခေဲ့တာတဲ့။ ကြှနျမရှိုးတိုးရှနျးတနျးဖွဈသှား ပမေယျ့လညျး မောငျကတကယျ့ကို ဘာမှမဖွဈသလို သာမာနျပုံစံနဲ့ပွောနတော။ စိတျဆိုးတဲ့ပုံ သဝနျတိုတဲ့ပုံတှဘောမှမရှိဘူး။ နောကျပွီးမောငျနဲ့ စကားတှဆေကျပွောဖွဈတယျ – “မေ .. မောငျလိုးတာ မေ မပွီးဘူးမလား” “ဘာမှမဖွဈပါဘူး မောငျ.. မအေဆငျပွပေါတယျ..” “မေ.. မောငျ့ကို အမှနျအတိုငျးပွောစမျးပါ… မောငျနဲ့လိုးတိုငျး မတေဈခါမှ မပွီးဘူးမဟုတျလား..” ကြှနျမှ ဘယျလိုဖွရေမနျးမသိဘူး။ မောငျပွောတာတကယျတော့ အမှနျပဲ။ ကြှနျမ မောငျနဲ့ ရညျးစားဘဝကနေ အခုအခြိနျထိ မောငျ လီးနဲ့လိုးလို့ တဈခါမှမပွီးဖူးသေးပါ။ မောငျက မှုတျပေးတဲ့အခါမှာ နညျးနညျးပါးပါးပွီးတာမြိုးပဲရှိတယျ။
ဒါပမေယျ့ မောငျကို အမှနျအတိုငျး ဝနျမခံခငျြဘူး။ ကြှနျမကွောငျ့ မောငျ့ စိတျထိခိုကျသှားမှာ မလိုလားဘူး။ ဒါပမေယျ့ မောငျက ဇှတျအတငျးဆကျမေးတယျ – “မေ အမှနျအတိုငျးပွောပါကှာ.. ဘာမှမဖွဈပါဘူး.. မဖှေကျထားတဲ့ ဘိုငျဗရတော လီးအတုကွီးမောငျတှတေ့ယျ.. မောငျနဲ့ မပွီးလို့ အဲတာနဲ့ဖွရေတာမလား..” ကြှနျမ ဘယျလိုမှ ဝနျမခံလို့မရတော့ဘဲ ဝနျခံလိုကျရတယျ။ ကြှနျမ မဖွခေငျြတာကို ဇှတျအတငျးဆကျမေးတဲ့ မောငျ့ကိုလဲ နညျးနညျး စိတျဆိုးမိတယျ။ “ဟုတျတယျ.. မအေဲတာနဲ့မှ ပွီးတယျမောငျ.. ဒါပမေယျ့ အဲတာ မောငျ့အပွဈလဲ မဟုတျဘူး မအေ့ပွဈလဲ မဟုတျဘူး.. မလေဲဘာမှ မတတျနိုငျပါဘူးမောငျ..” “ဟုတျပါတယျ.. အဲတာမောငျသိပါတယျ.. မကေို့ မောငျအပွဈမတငျပါဘူး.. မကေို့ မောငျ အရမျးခဈြတယျ.. ကိုယျခဈြတဲ့သူကို ပြျောစခေငျြတာ.. ကောငျးမှနျတဲ့ အရသာတှေ ခံစားစခေငျြတာ မောငျ့ ဆန်ဓပဲ.. ” အဲဒီညက ကြှနျမတို့ စကားတှေ အမြားကွီး ဆကျပွောဖွဈကွပမေယျ့ အကုနျမမှနျမိဘူး။ သသေခြောခြာ မှတျမိတာတဈခုက “မကေို့ မောငျ ဘယျလောကျခဈြလဲဆိုရငျ မကေို့ ပွီးအောငျ ကောငျးကောငျးလိုးပေးနိုငျတဲ့ အခွားယောကျကြားတဈယောကျနဲ့ သှားအိပျလဲ မောငျလကျခံပေးနိုငျတယျ.. မောငျဘာမှမဖွဈဘူး.. မောငျ့သဘောက မဆေ့န်ဒတှေ ပွညျ့ဝရငျကနြေပျတယျ..” ကြှနျမ ကိုယျ့နားကိုယျ မယုံနိုငျဘူးဖွဈသှားတယျ။
မောငျက ကြှနျမ အရငျ ရညျးစားဟောငျးတှနေဲ့ အတူနခေဲ့တုနျးက အကွောငျးတှေ ပွနျနားထောငျရတာ ကွိုကျမှနျးသိတယျ။ ကြှနျမကလဲ ပွောပွခဲ့တယျ။ သူစိတျထနျလာအောငျ နှိုးဆှရုံအတှကျပဲ လို့ထငျခဲ့တာ။ မောငျက အခုလို ထုတျပွောလာတော့ ကြှနျမ လြှောကျတှေးပွီး စိတျတှေ ရှုပျထှေးသှားတယျ။ ကြှနျမစိတျကို စမျးနတောလား။ သူကိုယျတိုငျ အခွားမိနျးကလေးတှနေဲ့ ဖောကျပွနျခငျြလို့ ကြှနျမကိုလဲ အဲလိုလုပျခိုငျးနတောလား။ ကြှနျမကလဲ စိတျထဲမထားတတျတော့ ထုတျမေးလိုကျတဲ့အခါ မဟုတျဘူးလို့ပဲ ပွောတယျ။ သူအခွား ဘယျမိနျးကလေးကိုမှ စိတျဝငျစားလို့မဟုတျဘူးတဲ့။ ကြှနျမကို ပြျောစခေငျြတာ သကျသကျပဲတဲ့။ မောငျ့ပုံစံကိုကွညျ့တော့ တညျတညျတနျ့တနျ့နဲ့ ရိုးရိုးသားသားပဲ ပွောနတော ဆိုတာ ကြှနျမယုံလာတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျမက မောငျနဲ့ လကျထပျထားလကျြနဲ့ မောငျမဟုတျတဲ့ အခွားတဈယောကျနဲ့ လိုး ရမယျဆိုတဲ့ ကိစ်စကွီးက တှေးကွညျ့တော့ စိတျထဲ တမြိုးကွီးပဲ။ အရငျက အခွား ယောကျကြားတှနေဲ့ ပလူးပလဲ နတော မှနျပမေယျ့ လိုးဖို့ လောကျထိတော့ တဈခါမှ မစဉျးစားခဲ့ဘူးတော့ တှေးကွညျ့တာနဲ့ရငျ အသညျးယားလာလို့ အဲဒီအကွောငျးပွောတာ ရပျခဲ့လိုကျတယျ။ နောကျရကျတှမှောလဲ မောငျက ကြှနျမကို အဲဒီအကွောငျးပဲ ဆကျပွောတယျ။ ပထမတော့ ကြှနျမ မောငျပွောတာ နားထောငျပွီး မောငျ့ကို အကဲခတျနရေုံပဲ။ နောကျတော့ ကြှနျမ စိတျယိုငျလာတယျ။
ထိနျးခြုပျထားရတဲ့ အတှငျးဆန်ဒတှကေရှိနတောကိုး။ ကြှနျမကိုယျကြှနျမ ပွနျလညျရိုးသားဖို့ လိုတယျလို့တှေးမိတယျ။ အပွငျသှားရငျး ဘားတှမှော ကျောဖီဆိုငျတှမှောတှတေဲ့ ကောငျလေး မိုကျမိုကျတှရေဲ့ ဖုနျးနံပါတျတှကေို ကြှနျမ အမွဲမှတျထားတယျ။ ကြှနျမနံပါတျကိုတော့ လိမျပွီးပွောလိုကျတာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျမ သူတို့ကို တဈခါမှ သှားပွီး ဆကျသှယျပါဘူး။ အဲဒီအကွောငျးကို မောငျ့ကို ပွောပွလိုကျတယျ။ မောငျ့ ကြှနျမကို ကိုနလေငျးဖုနျးနံပါတျ သိမျးထားလားလို့ မေးတယျ။ မောငျက ကြှနျမကို ပွုံးကွညျ့ပွီး ကြှနျမကို ကိုနလေငျးနဲ့ အတူသှားအိပျခငျြရငျ အိပျလို့ရတယျ သူစိတျမဆိုးဘူး ခှငျ့ပွုတယျဆိုပွီး ပွောလာတယျ။ ကြှနျမကိုယျကြှနျမ အတျော ဝခှေဲရခကျသှားတယျ။ တဈဖကျမှာလဲ တဈလငျတဈမယား သစ်စာရှိရှိပေါငျးသငျးရတဲ့ ဆကျဆံရေးမြိုးသာ ပုံမှနျဖွဈတယျလို့ယူဆတယျ။ တဈဖကျမှာလဲ ကြှနျမရဲ့ မပွညျ့ဝတဲ့ ရမကျဆန်ဒတှကေို ကြှနျမကိုယျကြှနျမ လိမျလညျပွီး ဖုံးကှယျထားရတယျ။ အရငျရညျးစားဟောငျးနဲ့ ပွတျပွီးတညျးက ကြှနျမမှာ တဈခါမှ ဆန်ဒတှမေပွညျ့ဝခဲ့ရတာ အခုဆို ၂ နှဈကြျောနပွေီ။ မောငျ့ကိုခဈြစိတျနဲ့ ကွိုးစားဖုံးကှယျထားပမေယျ့ ကြှနျမရဲ့ ရမကျဆန်ဒတှဟော အတှငျးမှာ လှိုကျလောငျထကွှနတော ကြှနျမသိတယျ။
ဒါကိုကြှနျမဘယျလောကျ ဖုံးကှယျထိနျးခြုပျထားနိုငျမှာလဲ။ အဲဒီနမှေ့ာပဲ မောငျ့ရဲ့ ဆန်ဒလား ကြှနျမရဲ့ ဆန်ဒလားတောငျ မဝခှေဲတတျတော့ဘူး။ ကြှနျမ ကိုယျနလေငျးဆီကို ဖုနျးချေါလိုကျပါတော့တယျ။ အခြိနျက နခေ့ငျး ၃ နာရီလောကျ။ ကြှနျမဆီက ဖုနျးရတော့ ကိုနလေငျးက ဝမျးသာအားရပဲ ဖုနျးကိုငျတယျ။ မောငျကွားအောငျကြှနျမ ဖုနျးအသံကိုဖှငျ့ပွီးပွောလိုကျတယျ။ မောငျ သံတှဲက သူငယျခငျြးဆီသှားလညျတာ ကြှနျမ မလိုကျခငျြလို့ နခေဲ့ကွောငျး မောငျ မနကျကမြှ ပွနျလာမှာဆိုတော့ တဈယောကျတညျးပငျြးလို့ ဖုနျးဆကျတာ ဖွဈကွောငျး ကိုနလေငျးကို ပွောလိုကျတယျ။ ကြှနျမတို့ အပွနျအလှနျပွောနတောကို မောငျက တကယျကို ကနြေပျပြျောရှငျတဲ့ပုံနဲ့ ကွညျ့နတေော့ ကြှနျမလဲ စိတျထဲမှာ ပိုပွီးရဲတငျးလာတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ဖုနျးနဲ့ စကားတှပွောရငျး ကိုနလေငျးက ကြှနျမ အဲဒီနကေ့ ကွိုးတဈခြောငျးဘီကီနီလေးနဲ့ အရမျးမိုကျတယျ စသဖွငျ့ ပွောလာတယျ။ ကြှနျမလိုခငျြတဲ့လမျးကွောငျးပျေါတော့ ရောကျလာပွီ။ ကိုနလေငျးက ညနသေူ့ဆီလာလညျပွီး ဝိုငျလေး ဘီယာလေး သောကျပါလားလို့ချေါတော့ ကြှနျမ မောငျ့မကျြနှာကို ခပျရို့ရို့ မော့ကွညျ့တော့ မောငျက ခေါငျးငွိမျ့ပွပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကိုနလေငျးကို ရမေိုးခြိုးပွီး ၆ နာရီလောကျ ထှကျလာခဲ့မယျ့အကွောငျး ပွောပွီး ဖုနျးခလြိုကျတယျ။ အိုး.. ကြှနျမ တကယျပဲ မောငျ့ခှငျ့ပွုခကျြနဲ့ သူစိမျးတဈယောကျနဲ့ သှားအိပျရတော့မယျဆိုတော့ နှဈနဲ့ခြီပွီး မပွညျ့ဝခဲ့တဲ့ သှေးသားဆန်ဒတှကေ တဈဘကျ၊ စိတျထဲမှာဘယျလိုကွီးလဲမသိခံစားနရေတာက တဈဖကျ။ ဘာဖွဈလို့ မောငျက ကနြေပျပီတိ ဖွဈနရေတာလဲဆိုတာကိုတော့ နားမလညျနိုငျဘူး။ ရခြေိုးပွီးနောကျ ဒီ ပထမဆုံး ဒိတျအတှကျ ကြှနျမ ရှေးခယျြလိုကျတဲ့ ဝတျစုံက အရမျးကို ဆကျဆီဈ ဖွဈနတေယျဆိုတာ ကြှနျမသိတယျ။ ပေါငျရငျးအောကျနားလောကျပဲ ရှိတဲ့ အနကျရောငျ ကိုယျကွပျ စကတျအတိုအောကျမှာ ကြှနျမရဲ့ ပေါငျတံသှယျသှယျလေးတှကေို လိငျဆှဲဆောငျမှု့ အပွညျ့ဖွဈသှားစမေယျ့ ပငျတီ ပါးပါးလေးဝတျထားတယျ။ အပျေါပိုငျးက အနီရောငျ ရငျစညျးလေး အပျေါမှာ ကြှနျမရဲ့ မပေါ့တပျေါ ရငျသားစိုငျအခြို့နဲ့ အောကျမှာ လကေ့ငျြ့ခနျးလိုကျစားလို့ အမွှောငျးလေးပျေါအောငျ ခပျြရငျနတေဲ့ ဗိုကျသားဖှေးဖှေးလေး။ ကြှနျမရဲ့ တငျပါးက ၃ လကျမဒေါကျရဲ့ ပံ့ပိုးမှုနဲ့ စှနျ့ကားကွှရှနတေယျ။ ကြှနျမကိုမွငျတော့ မောငျက မကျြလုံးကြှတျထှကျမတတျပွူးကွညျ့ပွီး “မကေ ဒီလိုဝတျမလို့လား..” လို့မေးတယျ။
ကြှနျမကလဲ နှုတျသီးကောငျးလြှာပါးနဲ့ နှုတျခမျးစူပွီး “ဟငျ.. ဒါမောငျ့ရဲ့ အကွံလေ.. မောငျပဲ ဒီလိုလုပျစခေငျြတာ မဟုတျဘူးလား.. သှားမယျ့သှားမှတော့ ကိုနလေငျးက ကြှနျမကို သခြောပေါကျကွံစညျအောငျ လုပျမှဖွဈမှာပေါ့.. ” လိုပွောတော့ မောငျက “အာ.. မဟုတျပါဘူးမရေယျ.. မောငျက မကွိုကျလို့ ပွောတာမဟုတျဘူး.. မောငျတကယျ့ကို အံ့သွသှားလို့ပါ” “အခုက မောငျသှားစခေငျြလို့ သှားရတာနျော.. နောကျကမြှ ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး မကေို့ အနိုငျမယူရဘူး.. အပွဈမတငျရဘူးနျော..” မောငျ ထိုငျရာကနေ ကြှနျမဆီလြှောကျလာပွီး ပုခုံးကိုကိုငျ နဖူးကိုဖှဖှလေးနမျးပွီးပွောတယျ – “အငျးပါမရေယျ.. မောငျက မကေို့ခဈြလှနျးလို့ကို ဒီလိုခိုငျးတာပါ.. မစေိတျပူသလိုမြိုး လုံးဝမလုပျဘူးနျော..” ကြှနျမ ဘနျဂလိုတှကွေားက အပငျတှကွေားထဲက လြှောကျလမျးလေးအတိုငျး ကိုနလေငျးအခနျးဘကျကို ထှကျလာခဲ့တယျ။ မောငျ့ကိုပွနျလှညျ့ကွညျ့တော့ မှနျတံခါးနောကျကနပွေီး ပွုံးကွညျ့ရငျး လကျလှမျးပွနတေယျ။ ကြှနျမ ပိုပွီးအားတကျလာတယျ။
စိတျပူတာတှေ လြော့သှားတယျ။ ကိုနလေငျး အခနျးဘကျကို လြှောကျလာရငျး မကျြလုံးထဲမှာ ကိုနလေငျးရဲ့ ဖုဖေါငျးနတေဲ့ ပေါငျးကွားကို မွငျယောကျလာတယျ။ ကြှနျမ လီးကောငျးကောငျးနဲ့ လိုးရတော့မယျ ဆိုတဲ့ အသိက သှေးသားထဲမှာ မွိုသိပျလာခဲ့ရတဲ့ ရမ်မကျတှကေို ဆူဝလောစတေယျ။ ကိုနလေငျးရဲ့ ဘနျဂလိုကိုရောကျပွီ။ ကိုနလေငျးက အပွုံးနဲ့အတူ တံခါးဖှငျ့ပေးတယျ။ ကြှနျမလဲ အပွုံးနဲ့ ကွှကွှ ရှရှလေး လြောကျဝငျသှားတယျ။ ကိုနလေငျးက အပျေါပိုငျး အင်ျကြီမပါ ဗလာကငျြးပွီး အောကျမှာ ဂငျြးဘောငျးဘီအကပျြဝတျထားတာ အရမျးကို လိငျဆှဲဆောငျမှုရှိနတေယျ။ သူက ကြှနျမရဲ့ အဝတျအစားတှကေို တခကျြစိုကျကွညျ့တယျ။ နောကျကြှနျမတို့ မကျြလုံးခွငျးဆုံပွီး နှဈယောကျလုံး တဈဦးလိုအပျခကျြကိုတဈဦး နားလညျတဲ့ အကွညျ့နဲ့ ကွညျ့လိုကျကွတယျ။ ကိုနလေငျးက ကြှနျမရဲ့ ပုခုံးကိုသိုငျးဖကျပွီး ဘနျဂလိုထဲကို ဆှဲချေါလိုကျတယျ။ ကိုနလေငျးက အခြိနျအမြားကွီး မဖွုနျးပါ။ တခါးကိုဂကျြခလြိုကျပွီး ကြှနျမကို သူဆီဆှဲယူကာ ကိုယျခငျြးကပျသိုငျးဖကျပွီး ကြှနျမရဲ့ နှုတျခမျးတှကေို စုပျယူနမျးရှုံ့ပါတော့တယျ။
ဘုရားရေ.. ကိုနလေငျးရဲ့ အရိုငျးဆနျတဲ့ အနမျးတှနေဲ့အတူ ဘောငျးဘီအောကျက မာကွောဖုဖေါငျးနနေဲ့ လီးကွီးနဲ့ ကြှနျမရဲ့ ဝမျးဗိုကျထိုတှနေ့တေဲ့ ခံစားမှုဟာ ကြှနျမရဲ့ စိတျတှကေို ရူးသှပျသှားစတေယျ။ ကြှနျမရဲ့ ဒေါကျဖိနပျတှကေို ဆှဲခြှတျပဈပွီး ကိုနလေငျး ပခုံးကို သိုငျးဖကျကာ ရပျနတေဲ့ ကိုနလေငျးပျေါခုနျတကျပွီး ခါးကို ခွထေောကျနှဈဖကျနဲ့ ခြိတျလိုကျတယျ။ ကိုနလေငျးက ကြှနျမခန်ဓာကိုယျကို အသာအယာ ပငျ့ကိုငျပွီး အိပျခနျးထဲကို ခြီသှားပါတယျ။ ကြှနျမခန်ဓာ ကိုယျက ရှိသငျ့တဲ့ တငျသား ရငျသားတှနေဲ့ အခြိုးကလြှပပမေယျ့ အရပျက ၅ ပေ ၄ လကျမဆိုတော့ လူကောငျထှားထှားသနျမာလှတဲ့ ကိုနလေငျးရဲ့ ရငျခှငျမှာ ကြှနျမဟာ သူစိတျကွိုကျ ပွုခငျြတိုငျး ပွုလို့ရအောငျကို သေးငယျနပေါတယျ။ ကြှနျမတို့ အဝတျအစားတှေ ဘယျလိုခြှတျလိုကျမိလညျးတောငျမသိတော့ပါ။ အဝတျအစားမဲ့နတေဲ့ နှဈဦးသား ကုတငျပျေါမှာ။ ကြှနျမလကျနှဈဖကျကို သူလကျတဈဘကျတညျးဖွငျ့ ဖမျးခြုပျပွီး ကြှနျမရဲ့ နှုတျလမျး၊ လညျပငျး၊ ရငျသားမြားကို နှုတျခမျးလြှာတို့နဲ့တဈဖုံ သနျမာသောလကျဖဝါးဖွငျ့တဖုံ လြှငျမွနျစှာ ပွေးလှားဆော့ကစားလိုကျသညျ။
ကြှနျမ မရတော့ပါ။ ဘယျလို အာသာဖွလေို့ မှ မလိုအပျတော့ပါ။ သှေးသားရမ်မဆန်ဒတှကေ ဆူဝနေပေါပွီ။ ကြှနျမရဲ့ ဆောကျပတျလေးမှာ အရညျတှေ ရှဲပွီး တစိမျ့စိမျ့ယိုနပေါပွီ။ ကြှနျမ ထှကျလာတုနျးက ကှနျဒုံးယူခဲ့ပမေယျ့ ဒီအထိအတှတှေ့ကွေားမှာ နဈမြောနရေတာကို နညျးနညျးလေးတောငျ မရပျနားခငျြတော့ဘူး။ နောကျပွီး ကြှနျမဝမျးခေါငျးပျေါမှာ ကိုနလေငျးရဲ့ မာကြောထှားကြိုငျးလှတဲ့ လီးကွီးရဲ့ အထိအတှကေို့ ဒီအတိုငျးပဲ ခံစားသာယာခငျြတဲ့ ဆန်ဒကိုမထိနျးခြုပျနိုငျတော့ဘူး။ ကိုနလေငျးရဲ့ ခါးကို ကြှနျမခွထေောကျတှနေဲ့ သိုငျးဖကျပွီးဆှဲယူလိုကျတယျ။ ဝမျးဗိုကျမှာ ကိုနလေငျးရဲ့ လီးကွီးရဲ့ပူနှေးတဲ့အထိအတှမှေ့ာ စိတျရိုငျးတှေ လှတျထှကျကုနျသညျ။ သနျမာလှတဲ့လီးကွီးတဈလြောကျ စောကျပတျကိုကော့ပွီး စောငျးတိုကျရငျး ရမ်မကျထနျသောရှိုကျသံဖွငျ့ “လိုးပေးပါ ရှငျ.. လိုးပေးပါတော့…” လို့ ပွောလိုကျတော့ ကိုနလေငျးက သူရဲလီးကွီးကို ကိုငျပွီး ထိပျဖွားမွှုပျအောငျ ဖိခလြိုကျသညျ။
အိုး…. ဘုရားရေ… ဒီလိုအထိအတှမြေို့း မခံစားခဲ့ရတာဘယျလောကျကွာနပွေီလဲ။ လီး ကွီးကွီးဖွငျ့ ဝေးခဲ့သညျမှာ ကွပွီဖွဈသော ကြှနျမရဲ့ ဆောကျပတျလေးအတှကျ ကိုနလေငျး လီးကွီးကို လကျခံဖို့ တကယျတနျး မလှယျလှပါ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျမဆောကျပတျလေးမြား တကယျကို ရှဲရှဲစိုနတောဖွဈလို့ နာကငျြမှုတော့ မခံစားရပါ။ စောငျပတျတဈခုလုံး တငျးကပျြပွညျ့လြှံနသေညျ့ ခံစားမှုမှာ အရမျးကို ကောငျးလှတယျ။ ကိုနလေငျးရဲ့ လီးကွီးက စညျးခကျြမှနျမှနျ ဆောငျ့ရငျး တဖွညျ့းဖွညျးအတှငျးပိုငျးထိ ပိုပိုတိုးဝငျ၍ ဆောငျ့လာသညျ။ တှရေ့သညျမှာ မကွာသေးသော သူစိမျးယောကျကြားရဲ့ လီးကွီးက မောငျ့ရဲ့ လီး တဈခါမှ မရောကျဖူးသောသော ဝမျးခေါငျးအတှငျး ထိတိုးဝငျမှနှေောကျ လာသညျကို မိနျးမောသာယာစှာ ခံစားရငျး စိတျလှတျကိုယျလှတျ အျောဟဈငွီးတှားပဈလိုကျသညျ။ ကိုနလေငျးအမွငျမှာ တဏှာမ အထနျမလေး ဖွဈနမေလား ကြှနျမ ဂရုမစိုကျတော့။ ဒါကြှနျမရဲ့ အရှိတရားပဲ။ ကြှနျမရဲ့ ရမကျဆန်ဒတှပေဲ။ ဘာလို့ဖုံးကှယျထားစရာလိုမှာလဲ။ ကြှနျမ နှဈကွိမျတိတိ ခန်ဓာကိုယျ တဆတျဆတျခါအောကျ အထှဋျအထိပျရောကျပွီးခဲ့ပွီ။ ကြှနျမ အမွဲလိုခငျြခဲ့သော မပွညျ့ဝနိုငျခဲ့သော ဆန်ဒတှစေိတျလှတျကိုယျလှတျ ခံစားနရေပွီ။ ကိုနလေငျးကလညျး ကြှနျမ ခန်ဓာကိုယျလေးကို နိုငျနငျးစှာကိုငျတှယျပွီး ပုံစံမြိုးစုံဖွငျ့လိုးပါတယျ။
တုတျခိုငျမာကြောသောလီးကွီးဖွငျ့ ကြှနျမဝမျးဗိုကျအတှငျးကို ထိုးခမြှေနှေောကျလိုကျရငျ တဈခါတဈခါမကျြဖွူလနျသှားလောကျအောကျ ကောငျးလှနျးလှတယျ။ ကိုနလေငျးက မတျတပျအနအေထားဖွငျ့ ကြှနျမရဲ့ ဒူနှဈခြောငျးအောကျမှ ပှခြေီ့ပွီး ကြှနျမကို တဈဗွုနျးဗွုနျးလိုးပါတယျ။ ကြှနျမရဲ့ လကျမြားက ကိုနလေငျး ခန်ဓာကိုယျကို တငျးကွပျစှာသိုငျးဖကျကုတျခွဈထားတယျ။ ကိုနလေငျး အားရပါးရ ကိုငျဆောငျ့တော့ ကြှနျမခန်ဂာကိုယျမှာ လပေျေါမှာတငျဝဲပွီး အရှိနျဖွငျ့ ကိုနလေငျးလီးကွီးတဈဆုံးထိဝငျသှား အောငျ ပွေးပွေးဆောငျ့ပါတယျ။ အရညျတှမှောလဲ တောကျတောကျယိုနပေါတယျ။ ပတျဝနျးကငျြမှာ ကမ်ဘာပကျြနရေငျတောငျ ကြှနျမဘာမှ သိလိမျ့မညျမထငျရအောငျ ပွငျးထနျတဲ့ရမ်မကျအာရုံတှမှောနဈမြောနခေဲ့တယျ။ အဲဒီလို လိုးနရေငျး ကိုနလေငျးက သူပွီးတော့မယျ ဘယျလိုပွီးရမလဲလို့ မေးပါတယျ။ ကြှနျမ ရငျခုနျတပျမကျစှာနဲ့ “အထဲမှာပွီးပေးပါ.. အထဲမှာပွီးပေး..” လို့ပွောရငျး လှတျမသှားရအောကျ ကိုနလေငျးခါးကို ခွထေောကျနဲ့ သိုငျးဖကျထားလိုကျတယျ။
ကိုနလေငျးက ကြှနျမကို ကုတငျစောကျးပျေါ ပကျလကျတငျပွီး အရှိနျတငျပွီး အားရပါးရ ဆောငျ့ခပြါတယျ။ ကြှနျမလဲ ကိုနလေငျးရဲ့ သုတျရညျတှရေဲ့ အထိအတှကေို့ မြှျောလငျ့ရငျး ဆောကျပတျကွှကျသားတှကေို အလိုလိုညှဈမိပါတယျ။ ကြှနျမတို့ နှဈယောကျ အားကုနျအျောဟဈရငျ ကိုနလေငျးရဲ့ နောကျဆုံး ဝမျးဗိုကျအဆုံးထိဝငျအောငျ အစှမျးကုနျထိုးသှငျးသော ဆောငျ့ခကျြမြားနဲ့အတူ ကြှနျမရဲ့သားအိမျဝကို ပူနှေးတဲ့ သုတျရညျတှေ ဒလဟောပနျးထုတျပါတယျ။ ကြှနျမရဲ့ ခန်ဓာကိုယျလဲ တဆတျဆတျတုနျခါပွီး ၃ ကွိမျမွောကျ အမွငျ့ဆုံးသော ဆန်ဒပွီးမွောကျမှု ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျမကို နလေငျးလီးကို မခြှတျသေးဘဲ သူ့ခါးကို ခွထေောကျနဲ့ ဆကျပွီး သိုငျးဖကျထားမိတယျ။ ကြှနျမတို့နှဈယောကျ ကနြေပျပြျောရှငျစှာနဲ့ ပှဖေ့ကျနမျးရုံကွပါတယျ။ လီးကွီးက တျောတျောနဲ့ မပြော့ပါဘူး။ ဆောကျပတျအတှငျးမှာ ပူနှေးတငျးကွပျတဲ့အတှကေို ရနိုငျသလောကျဆကျပွီး ခံစားနမေိတယျ။ လီးကိုဆှဲခြှတျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ကိုနလေငျး သုတျတှနေဲ့ ကြှနျမ အရညျတှနေဲ့ ရောနှောနတေဲ့ အရညျအခြို့ ပှကျခနဲ့ ယိုကလြာတယျ။
ဒါပမေယျ့ ကိုနလေငျးနဲ့ သုတျတှေ ကြှနျမ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ အမြားကွီကနျြသေးတယျဆိုတာ ခံစားသိနရေတယျ။ ဆန်ဒတှေ မပွညျ့ဝနိုငျဘဲ နှဈတှအေကွာကွီးကွာပွီးနောကျမှာ နောကျဆုံးတော့ ကြှနျမ စိတျကနြေပျအောငျ လုံးဝ ကောငျးကောငျးကွီးကို အလိုးခံခဲ့ရလို့ တျောတျောကနြေပျမိတယျ။ အိပျယာပျေါမှာလှဲရငျး ကိုနလေငျးနဲ့ကြှနျမ တဈယောကျကိုတဈယောကျကွညျပွီး ကနြေပျစှာ ပွုံးရယျလိုကျကွတယျ။ ကိုနလေငျးနဲ့ နောကျထပျ နှဈခြီတိတိ ဆကျလိုးပွီး အနားယူနေ ခြိနျမှာပဲ ရုတျတရကျ ကြှနျမမောငျ့ကို သတိရလာတယျ။ မောငျနဲ့ အရမျးတှခေ့ငျြလာတယျ။ အခြိနျကွညျ့တော့ ၈ နာရီခှဲရှိပွီ။ ကြှနျမတို့ အကွာကွီးကို လိုးခဲ့တာပါ့လား။ ကိုနလေငျးကို ကြှနျမပွနျတော့မယျနျောလို့ ပွောပွီး လူးလဲထ အဝတျတှပွေနျဝတျလိုကျတယျ။ ကြှနျမရုတျတရကျ ပွနျမယျဆိုတော့ သူအံ့သွသှားတဲ့ပုံရပမေယျ့ အိုကဆေိုတဲ့သဘောနဲ့ ခေါငျးငွိမျ့ပွပါတယျ။ ကြှနျမ အဝတျပွနျဝတျရငျးနဲ့ ကှနျဒုံးမသုံးမိတဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျကြိနျဆဲနမေိတယျ။ တခြိနျတညျးမှာပဲ ကိုနလေငျးရဲ့ သနျမာထှားကြိုငျးတဲ့ လီးကွီးနဲ့ အကာအကှယျမရှိ အားရပါးရ စိတျတိုငျးကလြိုးလိုကျရလို့ ကနြေပျနမေိတယျ။ လြှောကျလမျးလေးအတိုငျး မောငျ့ဆီကို ကြှနျမပွနျလာခဲ့တယျ။
မောငျ ဘယျလိုစောငျ့ကွိုနမှောလဲ။ ကြှနျမကို အရငျအတိုငျးခဈြဦးမှာလာ။ ပွောငျးလဲသှားမှာလား။ ကြှနျမ အခနျးတံခါးဖှငျ့ပွီး ဝငျလိုကျတော့ မောငျက ဆိုဖာပျေါမှာ စာအုပျဖတျနတေယျ။ ကြှနျမကို တကယျကို နှေးနှေးထှေးထှေးပွုံးပွတယျ။ ကြှနျမအရမျးလှနတေယျလို့လဲပွောတယျ။ ကြှနျမကို သိုငျးဖကျပွီး နဖူးလေးကိုနမျးရငျး အရမျးခဈြတယျလို့ပွောတဲ့အခါ ကြှနျမ အရမျးကိုနှေးထှေးလုံခွုံသှားရတယျ။ မောငျ့ကို တငျးကွပျစှာ ပွနျဖကျလိုကျပွီး မောငျ့ကိုလဲ အရမျးခဈြတယျ။ အရမျးကိုခဈြတယျ လို့ပွောလိုကျတယျ။ ကြှနျမ ကိုယျလကျသနျ့စငျဖို့ ရခြေိုးခနျးဆီကို သှားတော့ မောငျကလကျကိုလှမျးဆှဲတယျ။ ကြှနျမကို ကွညျ့ခငျြသေးတယျဆိုပွီး အိပျယာပျေါမှာ လှဲခိုငျးတယျ။ ကြှနျမကိုအစအဆုံးကွညျ့ပွီး ပငျတီ လေးပွနျဝတျမလာပါ့လားတဲ့။ ကြှနျမ လကျကိုငျအိတျထဲမှာ ထညျ့ယူလာကွောငျး ပွောလိုကျတယျ။
သူက ကြှနျမ ကိုယျကို ဆကျပွီးကွညျ့နတေယျ။ ကြှနျမ ကိုယျကွပျစကတျလေးမှာ ကြှနျမရဲ့အရညျတှနေဲ့ ကိုနလေငျးရဲ့သုတျတှစှေနျးနတေယျ။ ကြှနျမနညျးနညျးရှကျသှားပွီး “မောငျဘာကွညျ့နတောလဲ.. ဘာဖွဈခဲ့တယျဆိုတာ မောငျသိတာပဲမဟုတျဘူးလား.. ဒါမောငျဖွဈစခေငျြခဲ့တာပဲ မဟုတျဘူးလား..” လို့ စိတျထဲမှာပွောလိုကျမိတယျ။ အပွငျမှာတော့ တကယျထုတျမပွောခဲ့ပါဘူး။ မောငျ့ကို နညျးနညျးသနားသလိုတောငျ ဖွဈနမေိတယျ။ မောငျက ကြှနျမ အဝတျတှကေို ဆှဲခြှတျပွီး ခန်ဓာကိုယျကို ပှတျသပျလာတယျ။ ကြှနျမက မောငျ့ကို ခဏနဦေး.. ရသှေားဆေးလိုကျဦးမယျဆိုတော့ မလိုဘူးရတယျဆိုပွီးတားတယျ။ ကြှနျမခန်ဓာကိုယျ တဈခုလုံးကို ပှတျသပျနမျးရှုံပါတယျ။ ကြှနျမ မောပနျးပွီး ပွနျလာတာမို့ သိပျမလှုပျနိုငျဘဲ မကျြလုံးမှိတျပွီး မှိနျးရငျးနဲ့သာ မောငျပွုသမြှကို ခံနပေါတယျ။
ကြှနျမလုပျခငျြတာ မီးကုနျယမျးကုနျ လုပျခဲ့ပွီးပွီမဟုတျလား။ မောငျလုပျခငျြတာကိုလဲ ကြှနျမခှငျ့ပွုပေးရမှာပေါ့။ မောငျက သူ့အဝတျအစားတှေ ခြှတျပွီး ကြှနျမပေါငျကိုဖွဲကွညျ့တယျ။ ကြှနျမစောကျပတျထဲကနေ ကိုနလေငျးနဲ့ ကြှနျမနဲ့ အရညျအရော အနှော့လေးတှေ စိမျ့ကနြတေုနျး။ မောငျ့ကြှနျမဆောကျပတျကို လကျကလေးနဲ့ ညငျသာစှာပှတျပွီးကစားတယျ။ အထဲကိုလညျး နှိုကျတယျ။ လကျတဈဖကျကလညျး သူ့လီးကိုသူ ဂှငျးတိုကျနတေယျ။ မောငျဘာလုပျနတေယျဆိုတာ ကြှနျမ နားမလညျပါဘူး။ လကျနဲ့မှီရာ မောငျ့ရဲ့ ပေါငျလေးကိုသာ ပှတျသပျပေးနမေိတယျ။ မောငျဂှငျးတိုကျနရေငျး ခနနတေော့ အား အား… ဆိုအျောပွီး သူ့သုတျရညျတှကေို ကြှနျမ ဆောကျပတျကို တရေုံ့တပွေီ့း ပနျးထုတျလိုကျရငျး ပွီးသှားပါတယျ။ ပွီးတော့ ကြှနျမကို လာဖကျပွီး နမျးရှုံ့ရငျး ကြှနျမတို့နှဈယောကျ မနကျထိအောငျ အိပျပြျောသှားခဲ့ပါတယျ။
နောကျနမေ့နကျမှာ ကြှနျမ မောငျ့ကို ရှောငျနမေိတယျ။ မောငျက စကားလာပွောပမေယျ့ ပွနျမပွောမိဘူး။ တကယျတော့ ကြှနျမကိုယျကြှနျမလဲ ဘာခံစားနရေမှနျးမသိလို့ မောငျ့ကို တမငျသကျသကျ အဲလိုလုပျနတော။ ညနမှော မောငျကအတငျးဖကျပွီးစကားလာပွောတော့ ကြှနျမက “မောငျခိုငျးလို့ လုပျရတာ မောငျခိုငျးလို့ လုပျရတာ… ” ဆိုပွီး မောငျ့ကိုပဲ အပဈတငျပွောနမေိတယျ။ တယျတော့ မောငျ အတငျးခိုငျးလို့သှားတာ မဟုတျဘဲ ကြှနျမကိုယျတိုငျက ဆန်ဒတှေ မထိနျးနိုငျခဲ့တာ သိပါတယျ။ ပွောကွတဲ့စကားတှေ သခြောမမှတျမိပမေယျ့ မောငျက ကြှနျမဆန်ဒကိုလညျးသိနလေို့ သူကိုယျတိုငျကလဲ ဖွဈစခေငျြလို့ ဘယျသူ့ဘယျသူကမှ အပွဈမရှိသလို အမှားကြူးလှနျကွတာလဲ မဟုတျဘူးဆိုတာ ပွောပါတယျ။ ကြှနျမလညျး မောငျ့ရငျခှငျထဲမှု ရှိုကျပွီးငိုခလြိုကျပါတယျ။ ပွီးတော့ ကြှနျမကိုခဈြသေးလား။ ကြှနျမတို့ အိမျထောငျရေးက အရငျလိုအကောငျးအတိုငျး ဆကျရှိဦးမှာလားလို့ ကြှနျမ တဈခုခု အဆုံးသတျသှားသလို ခံစားနရေတယျလို့ ပွောလိုကျတယျ။ မောငျက “ဟုတျတယျ မေ .. အဆုံးသတျသှားတာ တဈခုရှိတယျ.. ဘာလဲဆိုတော့ မောငျတို့ လိမျညာဟနျဆောငျမှုတှေ အဆုံးသတျသှားတာပဲ .. မေ က သူစိမျးနဲ့ လိငျဆကျဆံပွီး ကနြေပျမှုရယူရတာ မဖွဈသငျ့ဘူးလို့ ကိုယျ့ကိုယျကို လိမျနတေယျ.. ဒါပမေယျ အဲတာကို မေ တကယျလိုအပျနတေယျ.. မေ ရှဆေ့ကျပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို လိမျထားလေ မရေဲ့ ပြျောရှငျမှုတှေ ပြောကျဆုံးလာလေ ဖွဈမှာပဲ။”
“ဒါဆို မောငျ့ ဘကျကရော ဘယျလိုရှိမှာလဲ.. မကေ မောငျ့ကိုဘယျမိနျးကလေးနဲ့မှ မြှဝမေပေးနိုငျဘူး.. မောငျက ရရှေညျမှာ မကေို့လကျခံနိုငျဦးမှာလား.. မောငျနဲ့ မရေဲ့ ဒီအိမျထောငျရေးလေးကို ပကျြစီးမှာ အရမျးစိတျပူတယျ..” မောငျက ကြှနျမကို တငျးကွပျစှာ ပှဖေ့ကျပွီး “မောငျ့ အခဈြတှကေို မေ နားမလညျသေးဘူးနျော..” ဆိုပွောပါတယျ။ သူအနနေဲ့ အခွားမိနျးကလေးတှနေဲ့ ဖောကျပွနျမှနျမဟုတျကွောငျးကို ကြှနျမရဲ့ ရမ်မကျဆန်ဒတှေ ဘယျလိုနညျးနဲ့ ပွညျ့ဝသညျဖွဈစေ သူကနြေပျကွောငျး စသဖွငျ့ .. ကြှနျမရဲ့ ရမ်မကျဆန်ဒပွညျ့ဝရငျ သူ့လဲ ရမကျဆန်ဒပွညျ့ဝကွောငျး ကြှနျမကိုသာအမွဲခဈြနမှောဖွဈကွောငျး.. ကြှနျမအနနေဲ့လညျး ဘယျသူနဲ့ လိငျဆကျဆံသညျဖွဈစေ သူ့ကိုအရငျအတိုငျး ဆကျခဈြနဖေို့သာ သူနဲ့အတူဆကျရှိနဖေို့သာ အဓိကဖွဈကွောငျး ပွောပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ကြှနျမနဲ့ မောငျ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ပိုပွီးနားလညျလာကွ ပိုပွီးခဈြလာကွပါတယျ။
အခုဆိုရငျ ကြှနျမ ဘယျသူနဲ့ ဒိတျသညျဖွဈစေ မောငျက ဘေးမှာအမွဲရှိနပွေီ။ ကြှနျမ တဈစိမျးတဈယောကျရဲ့ လီးကွီးနဲ့ စိတျလှတျကိုယျလှတျ အလိုးခံနခြေိနျ၊ ရမ်မကျဆန်ဒတှေ ယဈမူနေးခြိနျမှာပဲ မောငျ့လကျကို တငျးတငျးဆုပျကိုငျထားရတာကို ကနြေပျနမေိပွီ။ ကြှနျမသားအိမျကို သူစိမျးတဈယောကျရဲ့ သုတျရညျတှေ အရှိနျပွငျးပွငျးနဲ့ ပနျးထုတျလိုကျခြိနျမှာ မောငျ့နှုတျခမျးကို အားရပါးရ စုပျနမျးလိုကျရတာကို သာယာယဈမူးတတျလာပွီ။ ကိုယျ့ကိုယျကို လိမျညာထားတဲ့ အလိမျအညာတှကေို စှနျ့လှတျလိုကျနိုငျတဲ့ အခြိနျက ကြှနျမနဲ့မောငျရဲ့ ပိုမိုပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ ဘဝခရီးသဈကို စတငျတဲ့အခြိနျပါပဲ။ပွီးး ခရဒဈ
ကျွန်မက ဆိုရှယ်ကျတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။ ဒါကိုလည်း ဖုန်းကွယ်မထားပါဘူး။ မောင်နဲ့ လက်ထပ်ပြီးနောက်မှာလဲ ယောက်ကျားလေး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး စစနောက်နောက် သွားသွားလာလာပါပဲ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ယောက်ကျားလေးတွေနဲ့ ပလူးပလဲနေတတ်တယ်ပေါ့။ အဲလိုနေရတာကို ကျွန်မ ကြိုက်တယ်။ ကျွန်မ အဲဒီလိုနေတတ်တာကို မောင်ကသိပါတယ်။ သူ့အတွက် ဘာမှ ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတာလဲ ကျွန်မသိတယ်။ မောင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးနောက် ကျွန်မ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်ဖို့ဆိုတာ စိတ်တောင် မကူးဖူးပေမယ့်လည်း ကျွန်မမှာ လိင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ထူးခြားတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်စွဲလန်းမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ အိမ်ထောက်ကျပြီးနောက် ၂ နှစ်လောက်နေတော့ ကျွန်မနဲ့ အမျိုးသားနဲ့ ငပလီကို ရုံးပိတ်ရက်ရှည် သွားလည်ကြတယ်။ ကိုနေလင်းဆိုတဲ့အမျိုးသားနဲ့ လေယာဉ်ပေါ်မှာခုံတန်းတစ်ခုထဲကျပြီး အပန်းဖြေရိပ်သာ ကလာကြိုတဲ့ ကားနဲ့လည်း အတူတူစီးခဲ့တော့ သူနဲ့ ကျွန်မတို့လင်မယားနဲ့ အပြန်အလှန် ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ပြီး စကားစမြည် နည်းနည်းပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။
နောက်ရက်မှာ လင်မယားနှစ်ယောက် အပန်းဖြေရိပ်သာ က ရေကူးကန်ဘေးက လွတ်တဲ့ ခုံတန်းမှာ သွားထိုင်ကြတော့ ကျွန်မတို့ရှေ့က ခုံတန်းမှာ ယောက်ကျားတစ်ယောက် မျက်နှာပေါ် စာအုပ်တင်ပြီး စာဖတ်ရင်း အိပ်ပျော်နေပုံရပါတယ်။ လေယာဉ်အတူစီးလာတဲ့ ကိုနေလင်း ပါပဲ။ ရေကူးဘောင်းဘီ အတိုလေးပဲဝတ်ထားတဲ့ သူခန္ဓာကိုယ်ဟာ အသားလတ်လတ် ကြွက်သားအဖုအထစ်များနဲ့ ယောက်ကျားပီသစွာ စွဲဆောင်မှုရှိလွန်းလှပါတယ်။ ကျွန်မကို ရင်ခုန်စေတာကတော့ အနီးကပ်မြင်နေရတဲ့ သူ့ရဲ့ ရေကူးဘောင်းဘီအောက်က ဖုဖောင်းနေတဲ့နေရာပါပဲ။ ကျွန်မသတိလက်လွတ်ပဲ သူ့ရဲ့ ဖုဖောင်းနေတဲ့ ပေါင်ကြားကို အတန်ကြာ ငေးကြည့်နေမိတယ်။ ရေကူးဘောင်းဘီရဲ့ ဖုဖေါင်းနေတဲ့ နေရာအောက်မှာ တော်တော်ထွားကျိုင်းတဲ့ လီးကြီး ရှိတယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။ မောင်နဲ့အတူ ထိုင်ပြီး စကားပြောနေရင်းလဲ ကိုနေလင်းရဲ့ ဖုဖောင်းနေတဲ့နေရာကို မကြာမကြာ ခိုးကြည့်နေမိတယ်။
ခဏနေတော့ ကိုနေလင်းနိုးလာပါတယ်။ ကျွန်မတို့လင်မယားနဲ့ သူနဲ့ စကားစမြည် ထပ်ပြောဖြစ်ကြပြီး ဖုန်းနံပါတ် အပြန်အလှန်ယူ၊ ဖေ့ဘွတ် အကောင့်တွေပါ အပြန်အလှန် အပ်စ် လိုက်ကြပါတယ်။ သူ့ ဖေ့ဘွတ် အကောင့်ကို ကျွန်မဝင်ပြီး စပ်စုမိတော့ သူ့အသက်က ၃၀ လောက် ကျွန်မထက် ၄ နှစ်လောက်ကြီးတယ်။ အိမ်ထောင်ကွဲထားတာ မကြာသေးဘူး။ ငပလီကို စိတ်ပြေလက်ပျောက် အနားယူဖို့ ထွက်လာတဲ့ သဘောရှိတယ်။ ဒီ အပန်းဖြေရိပ်သာ က သူ့မိတ်ဆွေ ပိုင်တာဆိုတော့ ခဏခဏလာလည်တတ်ပုံလည်း ရတယ်။ သူ့အခန်းကလည်း ကျွန်မတို့ အခန်းနဲ့ သိပ်မဝေးဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်မလည်း ကိုနေလင်းနဲ့ ခင်ခင်မင်မင် ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း အတူထိုင်ရင်း ကျွန်မက ကိုနေလင်းပေါင်ကို ပုတ်တာ ကိုနေလင်းက ကျွန်မပခုံးကို လာကိုင်တာမျိုးတွေ ရှိလာပါတယ်။
ဒီလို ပလူးပလဲလုပ်ရတာမျိုးကို ကျွန်မသာယာတာတော့ အမှန်ပဲ။ ကိုနေလင်းကြည့်ရတာလဲ ဇသေးတဲ့သူတော့ မဟုတ်မယ့်ပုံပဲ။ တစ်ညမှာ မောင်နဲ့ လင်မယားအတူနေကြတယ်။ လိုးကြတယ်ပေါ့နော်။ မောင်သုတ်လွှတ်ပြီးသွားတော့ အိပ်ယာပေါ်မှာပဲ စကားပြောနေတုန်း ကျွန်မ မမျှော်လင့်ထားတာကို မောင်ကပြောလာတယ်။ ရေကူးကန်ဘေးမှာ ကိုနေလင်းရဲ့ လီးကြီးကို ကျွန်မ ငေးကြည့်နေတာ သူမြင်တယ်တဲ့။ ကြက်သေသေပြီး အကြာကြီးကြည့်နေခဲ့တာတဲ့။ ကျွန်မရှိုးတိုးရှန်းတန်းဖြစ်သွား ပေမယ့်လည်း မောင်ကတကယ့်ကို ဘာမှမဖြစ်သလို သာမာန်ပုံစံနဲ့ပြောနေတာ။ စိတ်ဆိုးတဲ့ပုံ သဝန်တိုတဲ့ပုံတွေဘာမှမရှိဘူး။ နောက်ပြီးမောင်နဲ့ စကားတွေဆက်ပြောဖြစ်တယ် – “မေ .. မောင်လိုးတာ မေ မပြီးဘူးမလား” “ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး မောင်.. မေအဆင်ပြေပါတယ်..” “မေ.. မောင့်ကို အမှန်အတိုင်းပြောစမ်းပါ… မောင်နဲ့လိုးတိုင်း မေတစ်ခါမှ မပြီးဘူးမဟုတ်လား..” ကျွန်မှ ဘယ်လိုဖြေရမန်းမသိဘူး။ မောင်ပြောတာတကယ်တော့ အမှန်ပဲ။ ကျွန်မ မောင်နဲ့ ရည်းစားဘဝကနေ အခုအချိန်ထိ မောင် လီးနဲ့လိုးလို့ တစ်ခါမှမပြီးဖူးသေးပါ။ မောင်က မှုတ်ပေးတဲ့အခါမှာ နည်းနည်းပါးပါးပြီးတာမျိုးပဲရှိတယ်။
ဒါပေမယ့် မောင်ကို အမှန်အတိုင်း ဝန်မခံချင်ဘူး။ ကျွန်မကြောင့် မောင့် စိတ်ထိခိုက်သွားမှာ မလိုလားဘူး။ ဒါပေမယ့် မောင်က ဇွတ်အတင်းဆက်မေးတယ် – “မေ အမှန်အတိုင်းပြောပါကွာ.. ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး.. မေဖွက်ထားတဲ့ ဘိုင်ဗရေတာ လီးအတုကြီးမောင်တွေ့တယ်.. မောင်နဲ့ မပြီးလို့ အဲတာနဲ့ဖြေရတာမလား..” ကျွန်မ ဘယ်လိုမှ ဝန်မခံလို့မရတော့ဘဲ ဝန်ခံလိုက်ရတယ်။ ကျွန်မ မဖြေချင်တာကို ဇွတ်အတင်းဆက်မေးတဲ့ မောင့်ကိုလဲ နည်းနည်း စိတ်ဆိုးမိတယ်။ “ဟုတ်တယ်.. မေအဲတာနဲ့မှ ပြီးတယ်မောင်.. ဒါပေမယ့် အဲတာ မောင့်အပြစ်လဲ မဟုတ်ဘူး မေ့အပြစ်လဲ မဟုတ်ဘူး.. မေလဲဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူးမောင်..” “ဟုတ်ပါတယ်.. အဲတာမောင်သိပါတယ်.. မေ့ကို မောင်အပြစ်မတင်ပါဘူး.. မေ့ကို မောင် အရမ်းချစ်တယ်.. ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ပျော်စေချင်တာ.. ကောင်းမွန်တဲ့ အရသာတွေ ခံစားစေချင်တာ မောင့် ဆန္ဓပဲ.. ” အဲဒီညက ကျွန်မတို့ စကားတွေ အများကြီး ဆက်ပြောဖြစ်ကြပေမယ့် အကုန်မမှန်မိဘူး။ သေသေချာချာ မှတ်မိတာတစ်ခုက “မေ့ကို မောင် ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုရင် မေ့ကို ပြီးအောင် ကောင်းကောင်းလိုးပေးနိုင်တဲ့ အခြားယောက်ကျားတစ်ယောက်နဲ့ သွားအိပ်လဲ မောင်လက်ခံပေးနိုင်တယ်.. မောင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး.. မောင့်သဘောက မေ့ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝရင်ကျေနပ်တယ်..” ကျွန်မ ကိုယ့်နားကိုယ် မယုံနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။
မောင်က ကျွန်မ အရင် ရည်းစားဟောင်းတွေနဲ့ အတူနေခဲ့တုန်းက အကြောင်းတွေ ပြန်နားထောင်ရတာ ကြိုက်မှန်းသိတယ်။ ကျွန်မကလဲ ပြောပြခဲ့တယ်။ သူစိတ်ထန်လာအောင် နှိုးဆွရုံအတွက်ပဲ လို့ထင်ခဲ့တာ။ မောင်က အခုလို ထုတ်ပြောလာတော့ ကျွန်မ လျှောက်တွေးပြီး စိတ်တွေ ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ ကျွန်မစိတ်ကို စမ်းနေတာလား။ သူကိုယ်တိုင် အခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ ဖောက်ပြန်ချင်လို့ ကျွန်မကိုလဲ အဲလိုလုပ်ခိုင်းနေတာလား။ ကျွန်မကလဲ စိတ်ထဲမထားတတ်တော့ ထုတ်မေးလိုက်တဲ့အခါ မဟုတ်ဘူးလို့ပဲ ပြောတယ်။ သူအခြား ဘယ်မိန်းကလေးကိုမှ စိတ်ဝင်စားလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ကျွန်မကို ပျော်စေချင်တာ သက်သက်ပဲတဲ့။ မောင့်ပုံစံကိုကြည့်တော့ တည်တည်တန့်တန့်နဲ့ ရိုးရိုးသားသားပဲ ပြောနေတာ ဆိုတာ ကျွန်မယုံလာတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မက မောင်နဲ့ လက်ထပ်ထားလျက်နဲ့ မောင်မဟုတ်တဲ့ အခြားတစ်ယောက်နဲ့ လိုး ရမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကြီးက တွေးကြည့်တော့ စိတ်ထဲ တမျိုးကြီးပဲ။ အရင်က အခြား ယောက်ကျားတွေနဲ့ ပလူးပလဲ နေတာ မှန်ပေမယ့် လိုးဖို့ လောက်ထိတော့ တစ်ခါမှ မစဉ်းစားခဲ့ဘူးတော့ တွေးကြည့်တာနဲ့ရင် အသည်းယားလာလို့ အဲဒီအကြောင်းပြောတာ ရပ်ခဲ့လိုက်တယ်။ နောက်ရက်တွေမှာလဲ မောင်က ကျွန်မကို အဲဒီအကြောင်းပဲ ဆက်ပြောတယ်။ ပထမတော့ ကျွန်မ မောင်ပြောတာ နားထောင်ပြီး မောင့်ကို အကဲခတ်နေရုံပဲ။ နောက်တော့ ကျွန်မ စိတ်ယိုင်လာတယ်။
ထိန်းချုပ်ထားရတဲ့ အတွင်းဆန္ဒတွေကရှိနေတာကိုး။ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ပြန်လည်ရိုးသားဖို့ လိုတယ်လို့တွေးမိတယ်။ အပြင်သွားရင်း ဘားတွေမှာ ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာတွေ့တဲ့ ကောင်လေး မိုက်မိုက်တွေရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ကျွန်မ အမြဲမှတ်ထားတယ်။ ကျွန်မနံပါတ်ကိုတော့ လိမ်ပြီးပြောလိုက်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ သူတို့ကို တစ်ခါမှ သွားပြီး ဆက်သွယ်ပါဘူး။ အဲဒီအကြောင်းကို မောင့်ကို ပြောပြလိုက်တယ်။ မောင့် ကျွန်မကို ကိုနေလင်းဖုန်းနံပါတ် သိမ်းထားလားလို့ မေးတယ်။ မောင်က ကျွန်မကို ပြုံးကြည့်ပြီး ကျွန်မကို ကိုနေလင်းနဲ့ အတူသွားအိပ်ချင်ရင် အိပ်လို့ရတယ် သူစိတ်မဆိုးဘူး ခွင့်ပြုတယ်ဆိုပြီး ပြောလာတယ်။ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ အတော် ဝေခွဲရခက်သွားတယ်။ တစ်ဖက်မှာလဲ တစ်လင်တစ်မယား သစ္စာရှိရှိပေါင်းသင်းရတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးသာ ပုံမှန်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်။ တစ်ဖက်မှာလဲ ကျွန်မရဲ့ မပြည့်ဝတဲ့ ရမက်ဆန္ဒတွေကို ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ လိမ်လည်ပြီး ဖုံးကွယ်ထားရတယ်။ အရင်ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ပြတ်ပြီးတည်းက ကျွန်မမှာ တစ်ခါမှ ဆန္ဒတွေမပြည့်ဝခဲ့ရတာ အခုဆို ၂ နှစ်ကျော်နေပြီ။ မောင့်ကိုချစ်စိတ်နဲ့ ကြိုးစားဖုံးကွယ်ထားပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ ရမက်ဆန္ဒတွေဟာ အတွင်းမှာ လှိုက်လောင်ထကြွနေတာ ကျွန်မသိတယ်။
ဒါကိုကျွန်မဘယ်လောက် ဖုံးကွယ်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှာလဲ။ အဲဒီနေ့မှာပဲ မောင့်ရဲ့ ဆန္ဒလား ကျွန်မရဲ့ ဆန္ဒလားတောင် မဝေခွဲတတ်တော့ဘူး။ ကျွန်မ ကိုယ်နေလင်းဆီကို ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်။ အချိန်က နေ့ခင်း ၃ နာရီလောက်။ ကျွန်မဆီက ဖုန်းရတော့ ကိုနေလင်းက ဝမ်းသာအားရပဲ ဖုန်းကိုင်တယ်။ မောင်ကြားအောင်ကျွန်မ ဖုန်းအသံကိုဖွင့်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ မောင် သံတွဲက သူငယ်ချင်းဆီသွားလည်တာ ကျွန်မ မလိုက်ချင်လို့ နေခဲ့ကြောင်း မောင် မနက်ကျမှ ပြန်လာမှာဆိုတော့ တစ်ယောက်တည်းပျင်းလို့ ဖုန်းဆက်တာ ဖြစ်ကြောင်း ကိုနေလင်းကို ပြောလိုက်တယ်။ ကျွန်မတို့ အပြန်အလှန်ပြောနေတာကို မောင်က တကယ်ကို ကျေနပ်ပျော်ရွင်တဲ့ပုံနဲ့ ကြည့်နေတော့ ကျွန်မလဲ စိတ်ထဲမှာ ပိုပြီးရဲတင်းလာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဖုန်းနဲ့ စကားတွေပြာရင်း ကိုနေလင်းက ကျွန်မ အဲဒီနေ့က ကြိုးတစ်ချောင်းဘီကီနီလေးနဲ့ အရမ်းမိုက်တယ် စသဖြင့် ပြောလာတယ်။ ကျွန်မလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တော့ ရောက်လာပြီ။ ကိုနေလင်းက ညနေသူ့ဆီလာလည်ပြီး ဝိုင်လေး ဘီယာလေး သောက်ပါလားလို့ခေါ်တော့ ကျွန်မ မောင့်မျက်နှာကို ခပ်ရို့ရို့ မော့ကြည့်တော့ မောင်က ခေါင်းငြိမ့်ပြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုနေလင်းကို ရေမိုးချိုးပြီး ၆ နာရီလောက် ထွက်လာခဲ့မယ့်အကြောင်း ပြောပြီး ဖုန်းချလိုက်တယ်။ အိုး.. ကျွန်မ တကယ်ပဲ မောင့်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ သွားအိပ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ နှစ်နဲ့ချီပြီး မပြည့်ဝခဲ့တဲ့ သွေးသားဆန္ဒတွေက တစ်ဘက်၊ စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုကြီးလဲမသိခံစားနေရတာက တစ်ဖက်။ ဘာဖြစ်လို့ မောင်က ကျေနပ်ပီတိ ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာကိုတော့ နားမလည်နိုင်ဘူး။ ရေချိုးပြီးနောက် ဒီ ပထမဆုံး ဒိတ်အတွက် ကျွန်မ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ဝတ်စုံက အရမ်းကို ဆက်ဆီစ် ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်မသိတယ်။ ပေါင်ရင်းအောက်နားလောက်ပဲ ရှိတဲ့ အနက်ရောင် ကိုယ်ကြပ် စကတ်အတိုအောက်မှာ ကျွန်မရဲ့ ပေါင်တံသွယ်သွယ်လေးတွေကို လိင်ဆွဲဆောင်မှု့ အပြည့်ဖြစ်သွားစေမယ့် ပင်တီ ပါးပါးလေးဝတ်ထားတယ်။ အပေါ်ပိုင်းက အနီရောင် ရင်စည်းလေး အပေါ်မှာ ကျွန်မရဲ့ မပေါ့တပေါ် ရင်သားစိုင်အချို့နဲ့ အောက်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းလိုက်စားလို့ အမြှောင်းလေးပေါ်အောင် ချပ်ရင်နေတဲ့ ဗိုက်သားဖွေးဖွေးလေး။ ကျွန်မရဲ့ တင်ပါးက ၃ လက်မဒေါက်ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုနဲ့ စွန့်ကားကြွရွနေတယ်။ ကျွန်မကိုမြင်တော့ မောင်က မျက်လုံးကျွတ်ထွက်မတတ်ပြူးကြည့်ပြီး “မေက ဒီလိုဝတ်မလို့လား..” လို့မေးတယ်။
ကျွန်မကလဲ နှုတ်သီးကောင်းလျှာပါးနဲ့ နှုတ်ခမ်းစူပြီး “ဟင်.. ဒါမောင့်ရဲ့ အကြံလေ.. မောင်ပဲ ဒီလိုလုပ်စေချင်တာ မဟုတ်ဘူးလား.. သွားမယ့်သွားမှတော့ ကိုနေလင်းက ကျွန်မကို သေချာပေါက်ကြံစည်အောင် လုပ်မှဖြစ်မှာပေါ့.. ” လိုပြောတော့ မောင်က “အာ.. မဟုတ်ပါဘူးမေရယ်.. မောင်က မကြိုက်လို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး.. မောင်တကယ့်ကို အံ့သြသွားလို့ပါ” “အခုက မောင်သွားစေချင်လို့ သွားရတာနော်.. နောက်ကျမှ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေ့ကို အနိုင်မယူရဘူး.. အပြစ်မတင်ရဘူးနော်..” မောင် ထိုင်ရာကနေ ကျွန်မဆီလျှောက်လာပြီး ပုခုံးကိုကိုင် နဖူးကိုဖွဖွလေးနမ်းပြီးပြောတယ် – “အင်းပါမေရယ်.. မောင်က မေ့ကိုချစ်လွန်းလို့ကို ဒီလိုခိုင်းတာပါ.. မေစိတ်ပူသလိုမျိုး လုံးဝမလုပ်ဘူးနော်..” ကျွန်မ ဘန်ဂလိုတွေကြားက အပင်တွေကြားထဲက လျှောက်လမ်းလေးအတိုင်း ကိုနေလင်းအခန်းဘက်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်။ မောင့်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တော့ မှန်တံခါးနောက်ကနေပြီး ပြုံးကြည့်ရင်း လက်လှမ်းပြနေတယ်။ ကျွန်မ ပိုပြီးအားတက်လာတယ်။
စိတ်ပူတာတွေ လျော့သွားတယ်။ ကိုနေလင်း အခန်းဘက်ကို လျှောက်လာရင်း မျက်လုံးထဲမှာ ကိုနေလင်းရဲ့ ဖုဖေါင်းနေတဲ့ ပေါင်းကြားကို မြင်ယောက်လာတယ်။ ကျွန်မ လီးကောင်းကောင်းနဲ့ လိုးရတော့မယ် ဆိုတဲ့ အသိက သွေးသားထဲမှာ မြိုသိပ်လာခဲ့ရတဲ့ ရမ္မက်တွေကို ဆူဝေလာစေတယ်။ ကိုနေလင်းရဲ့ ဘန်ဂလိုကိုရောက်ပြီ။ ကိုနေလင်းက အပြုံးနဲ့အတူ တံခါးဖွင့်ပေးတယ်။ ကျွန်မလဲ အပြုံးနဲ့ ကြွကြွ ရွရွလေး လျောက်ဝင်သွားတယ်။ ကိုနေလင်းက အပေါ်ပိုင်း အင်္ကျီမပါ ဗလာကျင်းပြီး အောက်မှာ ဂျင်းဘောင်းဘီအကျပ်ဝတ်ထားတာ အရမ်းကို လိင်ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတယ်။ သူက ကျွန်မရဲ့ အဝတ်အစားတွေကို တချက်စိုက်ကြည့်တယ်။ နောက်ကျွန်မတို့ မျက်လုံးခြင်းဆုံပြီး နှစ်ယောက်လုံး တစ်ဦးလိုအပ်ချက်ကိုတစ်ဦး နားလည်တဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ ကိုနေလင်းက ကျွန်မရဲ့ ပုခုံးကိုသိုင်းဖက်ပြီး ဘန်ဂလိုထဲကို ဆွဲခေါ်လိုက်တယ်။ ကိုနေလင်းက အချိန်အများကြီး မဖြုန်းပါ။ တခါးကိုဂျက်ချလိုက်ပြီး ကျွန်မကို သူဆီဆွဲယူကာ ကိုယ်ချင်းကပ်သိုင်းဖက်ပြီး ကျွန်မရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်ယူနမ်းရှုံ့ပါတော့တယ်။
ဘုရားရေ.. ကိုနေလင်းရဲ့ အရိုင်းဆန်တဲ့ အနမ်းတွေနဲ့အတူ ဘောင်းဘီအောက်က မာကြောဖုဖေါင်းနေနဲ့ လီးကြီးနဲ့ ကျွန်မရဲ့ ဝမ်းဗိုက်ထိုတွေ့နေတဲ့ ခံစားမှုဟာ ကျွန်မရဲ့ စိတ်တွေကို ရူးသွပ်သွားစေတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ဒေါက်ဖိနပ်တွေကို ဆွဲချွတ်ပစ်ပြီး ကိုနေလင်း ပခုံးကို သိုင်းဖက်ကာ ရပ်နေတဲ့ ကိုနေလင်းပေါ်ခုန်တက်ပြီး ခါးကို ခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ ချိတ်လိုက်တယ်။ ကိုနေလင်းက ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်ကို အသာအယာ ပင့်ကိုင်ပြီး အိပ်ခန်းထဲကို ချီသွားပါတယ်။ ကျွန်မခန္ဓာ ကိုယ်က ရှိသင့်တဲ့ တင်သား ရင်သားတွေနဲ့ အချိုးကျလှပပေမယ့် အရပ်က ၅ ပေ ၄ လက်မဆိုတော့ လူကောင်ထွားထွားသန်မာလှတဲ့ ကိုနေလင်းရဲ့ ရင်ခွင်မှာ ကျွန်မဟာ သူစိတ်ကြိုက် ပြုချင်တိုင်း ပြုလို့ရအောင်ကို သေးငယ်နေပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အဝတ်အစားတွေ ဘယ်လိုချွတ်လိုက်မိလည်းတောင်မသိတော့ပါ။ အဝတ်အစားမဲ့နေတဲ့ နှစ်ဦးသား ကုတင်ပေါ်မှာ။ ကျွန်မလက်နှစ်ဖက်ကို သူလက်တစ်ဘက်တည်းဖြင့် ဖမ်းချုပ်ပြီး ကျွန်မရဲ့ နှုတ်လမ်း၊ လည်ပင်း၊ ရင်သားများကို နှုတ်ခမ်းလျှာတို့နဲ့တစ်ဖုံ သန်မာသောလက်ဖဝါးဖြင့်တဖုံ လျှင်မြန်စွာ ပြေးလွှားဆော့ကစားလိုက်သည်။
ကျွန်မ မရတော့ပါ။ ဘယ်လို အာသာဖြေလို့ မှ မလိုအပ်တော့ပါ။ သွေးသားရမ္မဆန္ဒတွေက ဆူဝေနေပါပြီ။ ကျွန်မရဲ့ ဆောက်ပတ်လေးမှာ အရည်တွေ ရွဲပြီး တစိမ့်စိမ့်ယိုနေပါပြီ။ ကျွန်မ ထွက်လာတုန်းက ကွန်ဒုံးယူခဲ့ပေမယ့် ဒီအထိအတွေ့တွေကြားမှာ နစ်မျောနေရတာကို နည်းနည်းလေးတောင် မရပ်နားချင်တော့ဘူး။ နောက်ပြီး ကျွန်မဝမ်းခေါင်းပေါ်မှာ ကိုနေလင်းရဲ့ မာကျောထွားကျိုင်းလှတဲ့ လီးကြီးရဲ့ အထိအတွေ့ကို ဒီအတိုင်းပဲ ခံစားသာယာချင်တဲ့ ဆန္ဒကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူး။ ကိုနေလင်းရဲ့ ခါးကို ကျွန်မခြေထောက်တွေနဲ့ သိုင်းဖက်ပြီးဆွဲယူလိုက်တယ်။ ဝမ်းဗိုက်မှာ ကိုနေလင်းရဲ့ လီးကြီးရဲ့ပူနွေးတဲ့အထိအတွေ့မှာ စိတ်ရိုင်းတွေ လွတ်ထွက်ကုန်သည်။ သန်မာလှတဲ့လီးကြီးတစ်လျောက် စောက်ပတ်ကိုကော့ပြီး စောင်းတိုက်ရင်း ရမ္မက်ထန်သောရှိုက်သံဖြင့် “လိုးပေးပါ ရှင်.. လိုးပေးပါတော့…” လို့ ပြောလိုက်တော့ ကိုနေလင်းက သူရဲလီးကြီးကို ကိုင်ပြီး ထိပ်ဖြားမြှုပ်အောင် ဖိချလိုက်သည်။
အိုး…. ဘုရားရေ… ဒီလိုအထိအတွေ့မျိုး မခံစားခဲ့ရတာဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲ။ လီး ကြီးကြီးဖြင့် ဝေးခဲ့သည်မှာ ကြပြီဖြစ်သော ကျွန်မရဲ့ ဆောက်ပတ်လေးအတွက် ကိုနေလင်း လီးကြီးကို လက်ခံဖို့ တကယ်တန်း မလွယ်လှပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မဆောက်ပတ်လေးများ တကယ်ကို ရွဲရွဲစိုနေတာဖြစ်လို့ နာကျင်မှုတော့ မခံစားရပါ။ စောင်ပတ်တစ်ခုလုံး တင်းကျပ်ပြည့်လျှံနေသည့် ခံစားမှုမှာ အရမ်းကို ကောင်းလှတယ်။ ကိုနေလင်းရဲ့ လီးကြီးက စည်းချက်မှန်မှန် ဆောင့်ရင်း တဖြည့်းဖြည်းအတွင်းပိုင်းထိ ပိုပိုတိုးဝင်၍ ဆောင့်လာသည်။ တွေ့ရသည်မှာ မကြာသေးသော သူစိမ်းယောက်ကျားရဲ့ လီးကြီးက မောင့်ရဲ့ လီး တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသောသော ဝမ်းခေါင်းအတွင်း ထိတိုးဝင်မွှေနှောက် လာသည်ကို မိန်းမောသာယာစွာ ခံစားရင်း စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် အော်ဟစ်ငြီးတွားပစ်လိုက်သည်။ ကိုနေလင်းအမြင်မှာ တဏှာမ အထန်မလေး ဖြစ်နေမလား ကျွန်မ ဂရုမစိုက်တော့။ ဒါကျွန်မရဲ့ အရှိတရားပဲ။ ကျွန်မရဲ့ ရမက်ဆန္ဒတွေပဲ။ ဘာလို့ဖုံးကွယ်ထားစရာလိုမှာလဲ။ ကျွန်မ နှစ်ကြိမ်တိတိ ခန္ဓာကိုယ် တဆတ်ဆတ်ခါအောက် အထွဋ်အထိပ်ရောက်ပြီးခဲ့ပြီ။ ကျွန်မ အမြဲလိုချင်ခဲ့သော မပြည့်ဝနိုင်ခဲ့သော ဆန္ဒတွေစိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ခံစားနေရပြီ။ ကိုနေလင်းကလည်း ကျွန်မ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို နိုင်နင်းစွာကိုင်တွယ်ပြီး ပုံစံမျိုးစုံဖြင့်လိုးပါတယ်။
တုတ်ခိုင်မာကျောသောလီးကြီးဖြင့် ကျွန်မဝမ်းဗိုက်အတွင်းကို ထိုးချေမွှေနှောက်လိုက်ရင် တစ်ခါတစ်ခါမျက်ဖြူလန်သွားလောက်အောက် ကောင်းလွန်းလှတယ်။ ကိုနေလင်းက မတ်တပ်အနေအထားဖြင့် ကျွန်မရဲ့ ဒူနှစ်ချောင်းအောက်မှ ပွေ့ချီပြီး ကျွန်မကို တစ်ဗြုန်းဗြုန်းလိုးပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ လက်များက ကိုနေလင်း ခန္ဓာကိုယ်ကို တင်းကြပ်စွာသိုင်းဖက်ကုတ်ခြစ်ထားတယ်။ ကိုနေလင်း အားရပါးရ ကိုင်ဆောင့်တော့ ကျွန်မခန္ဂာကိုယ်မှာ လေပေါ်မှာတင်ဝဲပြီး အရှိန်ဖြင့် ကိုနေလင်းလီးကြီးတစ်ဆုံးထိဝင်သွား အောင် ပြေးပြေးဆောင့်ပါတယ်။ အရည်တွေမှာလဲ တောက်တောက်ယိုနေပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကမ္ဘာပျက်နေရင်တောင် ကျွန်မဘာမှ သိလိမ့်မည်မထင်ရအောင် ပြင်းထန်တဲ့ရမ္မက်အာရုံတွေမှာနစ်မျောနေခဲ့တယ်။ အဲဒီလို လိုးနေရင်း ကိုနေလင်းက သူပြီးတော့မယ် ဘယ်လိုပြီးရမလဲလို့ မေးပါတယ်။ ကျွန်မ ရင်ခုန်တပ်မက်စွာနဲ့ “အထဲမှာပြီးပေးပါ.. အထဲမှာပြီးပေး..” လို့ပြောရင်း လွတ်မသွားရအောက် ကိုနေလင်းခါးကို ခြေထောက်နဲ့ သိုင်းဖက်ထားလိုက်တယ်။
ကိုနေလင်းက ကျွန်မကို ကုတင်စောက်းပေါ် ပက်လက်တင်ပြီး အရှိန်တင်ပြီး အားရပါးရ ဆောင့်ချပါတယ်။ ကျွန်မလဲ ကိုနေလင်းရဲ့ သုတ်ရည်တွေရဲ့ အထိအတွေ့ကို မျှော်လင့်ရင်း ဆောက်ပတ်ကြွက်သားတွေကို အလိုလိုညှစ်မိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် အားကုန်အော်ဟစ်ရင် ကိုနေလင်းရဲ့ နောက်ဆုံး ဝမ်းဗိုက်အဆုံးထိဝင်အောင် အစွမ်းကုန်ထိုးသွင်းသော ဆောင့်ချက်များနဲ့အတူ ကျွန်မရဲ့သားအိမ်ဝကို ပူနွေးတဲ့ သုတ်ရည်တွေ ဒလဟောပန်းထုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လဲ တဆတ်ဆတ်တုန်ခါပြီး ၃ ကြိမ်မြောက် အမြင့်ဆုံးသော ဆန္ဒပြီးမြောက်မှု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မကို နေလင်းလီးကို မချွတ်သေးဘဲ သူ့ခါးကို ခြေထောက်နဲ့ ဆက်ပြီး သိုင်းဖက်ထားမိတယ်။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ကျေနပ်ပျော်ရွင်စွာနဲ့ ပွေ့ဖက်နမ်းရုံကြပါတယ်။ လီးကြီးက တော်တော်နဲ့ မပျော့ပါဘူး။ ဆောက်ပတ်အတွင်းမှာ ပူနွေးတင်းကြပ်တဲ့အတွေကို ရနိုင်သလောက်ဆက်ပြီး ခံစားနေမိတယ်။ လီးကိုဆွဲချွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကိုနေလင်း သုတ်တွေနဲ့ ကျွန်မ အရည်တွေနဲ့ ရောနှောနေတဲ့ အရည်အချို့ ပွက်ခနဲ့ ယိုကျလာတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုနေလင်းနဲ့ သုတ်တွေ ကျွန်မ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အများကြီကျန်သေးတယ်ဆိုတာ ခံစားသိနေရတယ်။ ဆန္ဒတွေ မပြည့်ဝနိုင်ဘဲ နှစ်တွေအကြာကြီးကြာပြီးနောက်မှာ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မ စိတ်ကျေနပ်အောင် လုံးဝ ကောင်းကောင်းကြီးကို အလိုးခံခဲ့ရလို့ တော်တော်ကျေနပ်မိတယ်။ အိပ်ယာပေါ်မှာလှဲရင်း ကိုနေလင်းနဲ့ကျွန်မ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကြည်ပြီး ကျေနပ်စွာ ပြုံးရယ်လိုက်ကြတယ်။ ကိုနေလင်းနဲ့ နောက်ထပ် နှစ်ချီတိတိ ဆက်လိုးပြီး အနားယူနေ ချိန်မှာပဲ ရုတ်တရက် ကျွန်မမောင့်ကို သတိရလာတယ်။ မောင်နဲ့ အရမ်းတွေ့ချင်လာတယ်။ အချိန်ကြည့်တော့ ၈ နာရီခွဲရှိပြီ။ ကျွန်မတို့ အကြာကြီးကို လိုးခဲ့တာပါ့လား။ ကိုနေလင်းကို ကျွန်မပြန်တော့မယ်နော်လို့ ပြောပြီး လူးလဲထ အဝတ်တွေပြန်ဝတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်မရုတ်တရက် ပြန်မယ်ဆိုတော့ သူအံ့သြသွားတဲ့ပုံရပေမယ့် အိုကေဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ခေါင်းငြိမ့်ပြပါတယ်။ ကျွန်မ အဝတ်ပြန်ဝတ်ရင်းနဲ့ ကွန်ဒုံးမသုံးမိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကျိန်ဆဲနေမိတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ကိုနေလင်းရဲ့ သန်မာထွားကျိုင်းတဲ့ လီးကြီးနဲ့ အကာအကွယ်မရှိ အားရပါးရ စိတ်တိုင်းကျလိုးလိုက်ရလို့ ကျေနပ်နေမိတယ်။ လျှောက်လမ်းလေးအတိုင်း မောင့်ဆီကို ကျွန်မပြန်လာခဲ့တယ်။
မောင် ဘယ်လိုစောင့်ကြိုနေမှာလဲ။ ကျွန်မကို အရင်အတိုင်းချစ်ဦးမှာလာ။ ပြောင်းလဲသွားမှာလား။ ကျွန်မ အခန်းတံခါးဖွင့်ပြီး ဝင်လိုက်တော့ မောင်က ဆိုဖာပေါ်မှာ စာအုပ်ဖတ်နေတယ်။ ကျွန်မကို တကယ်ကို နွေးနွေးထွေးထွေးပြုံးပြတယ်။ ကျွန်မအရမ်းလှနေတယ်လို့လဲပြောတယ်။ ကျွန်မကို သိုင်းဖက်ပြီး နဖူးလေးကိုနမ်းရင်း အရမ်းချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါ ကျွန်မ အရမ်းကိုနွေးထွေးလုံခြုံသွားရတယ်။ မောင့်ကို တင်းကြပ်စွာ ပြန်ဖက်လိုက်ပြီး မောင့်ကိုလဲ အရမ်းချစ်တယ်။ အရမ်းကိုချစ်တယ် လို့ပြောလိုက်တယ်။ ကျွန်မ ကိုယ်လက်သန့်စင်ဖို့ ရေချိုးခန်းဆီကို သွားတော့ မောင်ကလက်ကိုလှမ်းဆွဲတယ်။ ကျွန်မကို ကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုပြီး အိပ်ယာပေါ်မှာ လှဲခိုင်းတယ်။ ကျွန်မကိုအစအဆုံးကြည့်ပြီး ပင်တီ လေးပြန်ဝတ်မလာပါ့လားတဲ့။ ကျွန်မ လက်ကိုင်အိတ်ထဲမှာ ထည့်ယူလာကြောင်း ပြောလိုက်တယ်။
သူက ကျွန်မ ကိုယ်ကို ဆက်ပြီးကြည့်နေတယ်။ ကျွန်မ ကိုယ်ကြပ်စကတ်လေးမှာ ကျွန်မရဲ့အရည်တွေနဲ့ ကိုနေလင်းရဲ့သုတ်တွေစွန်းနေတယ်။ ကျွန်မနည်းနည်းရှက်သွားပြီး “မောင်ဘာကြည့်နေတာလဲ.. ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မောင်သိတာပဲမဟုတ်ဘူးလား.. ဒါမောင်ဖြစ်စေချင်ခဲ့တာပဲ မဟုတ်ဘူးလား..” လို့ စိတ်ထဲမှာပြောလိုက်မိတယ်။ အပြင်မှာတော့ တကယ်ထုတ်မပြောခဲ့ပါဘူး။ မောင့်ကို နည်းနည်းသနားသလိုတောင် ဖြစ်နေမိတယ်။ မောင်က ကျွန်မ အဝတ်တွေကို ဆွဲချွတ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ပွတ်သပ်လာတယ်။ ကျွန်မက မောင့်ကို ခဏနေဦး.. ရေသွားဆေးလိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့ မလိုဘူးရတယ်ဆိုပြီးတားတယ်။ ကျွန်မခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို ပွတ်သပ်နမ်းရှုံပါတယ်။ ကျွန်မ မောပန်းပြီး ပြန်လာတာမို့ သိပ်မလှုပ်နိုင်ဘဲ မျက်လုံးမှိတ်ပြီး မှိန်းရင်းနဲ့သာ မောင်ပြုသမျှကို ခံနေပါတယ်။
ကျွန်မလုပ်ချင်တာ မီးကုန်ယမ်းကုန် လုပ်ခဲ့ပြီးပြီမဟုတ်လား။ မောင်လုပ်ချင်တာကိုလဲ ကျွန်မခွင့်ပြုပေးရမှာပေါ့။ မောင်က သူ့အဝတ်အစားတွေ ချွတ်ပြီး ကျွန်မပေါင်ကိုဖြဲကြည့်တယ်။ ကျွန်မစောက်ပတ်ထဲကနေ ကိုနေလင်းနဲ့ ကျွန်မနဲ့ အရည်အရော အနှော့လေးတွေ စိမ့်ကျနေတုန်း။ မောင့်ကျွန်မဆောက်ပတ်ကို လက်ကလေးနဲ့ ညင်သာစွာပွတ်ပြီးကစားတယ်။ အထဲကိုလည်း နှိုက်တယ်။ လက်တစ်ဖက်ကလည်း သူ့လီးကိုသူ ဂွင်းတိုက်နေတယ်။ မောင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်မ နားမလည်ပါဘူး။ လက်နဲ့မှီရာ မောင့်ရဲ့ ပေါင်လေးကိုသာ ပွတ်သပ်ပေးနေမိတယ်။ မောင်ဂွင်းတိုက်နေရင်း ခနနေတော့ အား အား… ဆိုအော်ပြီး သူ့သုတ်ရည်တွေကို ကျွန်မ ဆောက်ပတ်ကို တေ့ရုံတေ့ပြီး ပန်းထုတ်လိုက်ရင်း ပြီးသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မကို လာဖက်ပြီး နမ်းရှုံ့ရင်း ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် မနက်ထိအောင် အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။
နောက်နေ့မနက်မှာ ကျွန်မ မောင့်ကို ရှောင်နေမိတယ်။ မောင်က စကားလာပြောပေမယ့် ပြန်မပြောမိဘူး။ တကယ်တော့ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မလဲ ဘာခံစားနေရမှန်းမသိလို့ မောင့်ကို တမင်သက်သက် အဲလိုလုပ်နေတာ။ ညနေမှာ မောင်ကအတင်းဖက်ပြီးစကားလာပြောတော့ ကျွန်မက “မောင်ခိုင်းလို့ လုပ်ရတာ မောင်ခိုင်းလို့ လုပ်ရတာ… ” ဆိုပြီး မောင့်ကိုပဲ အပစ်တင်ပြောနေမိတယ်။ တယ်တော့ မောင် အတင်းခိုင်းလို့သွားတာ မဟုတ်ဘဲ ကျွန်မကိုယ်တိုင်က ဆန္ဒတွေ မထိန်းနိုင်ခဲ့တာ သိပါတယ်။ ပြောကြတဲ့စကားတွေ သေချာမမှတ်မိပေမယ့် မောင်က ကျွန်မဆန္ဒကိုလည်းသိနေလို့ သူကိုယ်တိုင်ကလဲ ဖြစ်စေချင်လို့ ဘယ်သူ့ဘယ်သူကမှ အပြစ်မရှိသလို အမှားကျူးလွန်ကြတာလဲ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပြောပါတယ်။ ကျွန်မလည်း မောင့်ရင်ခွင်ထဲမှု ရှိုက်ပြီးငိုချလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မကိုချစ်သေးလား။ ကျွန်မတို့ အိမ်ထောင်ရေးက အရင်လိုအကောင်းအတိုင်း ဆက်ရှိဦးမှာလားလို့ ကျွန်မ တစ်ခုခု အဆုံးသတ်သွားသလို ခံစားနေရတယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ မောင်က “ဟုတ်တယ် မေ .. အဆုံးသတ်သွားတာ တစ်ခုရှိတယ်.. ဘာလဲဆိုတော့ မောင်တို့ လိမ်ညာဟန်ဆောင်မှုတွေ အဆုံးသတ်သွားတာပဲ .. မေ က သူစိမ်းနဲ့ လိင်ဆက်ဆံပြီး ကျေနပ်မှုရယူရတာ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိမ်နေတယ်.. ဒါပေမယ် အဲတာကို မေ တကယ်လိုအပ်နေတယ်.. မေ ရှေ့ဆက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိမ်ထားလေ မေ့ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးလာလေ ဖြစ်မှာပဲ။”
“ဒါဆို မောင့် ဘက်ကရော ဘယ်လိုရှိမှာလဲ.. မေက မောင့်ကိုဘယ်မိန်းကလေးနဲ့မှ မျှဝေမပေးနိုင်ဘူး.. မောင်က ရေရှည်မှာ မေ့ကိုလက်ခံနိုင်ဦးမှာလား.. မောင်နဲ့ မေ့ရဲ့ ဒီအိမ်ထောင်ရေးလေးကို ပျက်စီးမှာ အရမ်းစိတ်ပူတယ်..” မောင်က ကျွန်မကို တင်းကြပ်စွာ ပွေ့ဖက်ပြီး “မောင့် အချစ်တွေကို မေ နားမလည်သေးဘူးနော်..” ဆိုပြောပါတယ်။ သူအနေနဲ့ အခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ ဖောက်ပြန်မှန်မဟုတ်ကြောင်းကို ကျွန်မရဲ့ ရမ္မက်ဆန္ဒတွေ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပြည့်ဝသည်ဖြစ်စေ သူကျေနပ်ကြောင်း စသဖြင့် .. ကျွန်မရဲ့ ရမ္မက်ဆန္ဒပြည့်ဝရင် သူ့လဲ ရမက်ဆန္ဒပြည့်ဝကြောင်း ကျွန်မကိုသာအမြဲချစ်နေမှာဖြစ်ကြောင်း.. ကျွန်မအနေနဲ့လည်း ဘယ်သူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံသည်ဖြစ်စေ သူ့ကိုအရင်အတိုင်း ဆက်ချစ်နေဖို့သာ သူနဲ့အတူဆက်ရှိနေဖို့သာ အဓိကဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မနဲ့ မောင် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပိုပြီးနားလည်လာကြ ပိုပြီးချစ်လာကြပါတယ်။
အခုဆိုရင် ကျွန်မ ဘယ်သူနဲ့ ဒိတ်သည်ဖြစ်စေ မောင်က ဘေးမှာအမြဲရှိနေပြီ။ ကျွန်မ တစ်စိမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ လီးကြီးနဲ့ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် အလိုးခံနေချိန်၊ ရမ္မက်ဆန္ဒတွေ ယစ်မူနေးချိန်မှာပဲ မောင့်လက်ကို တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားရတာကို ကျေနပ်နေမိပြီ။ ကျွန်မသားအိမ်ကို သူစိမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ သုတ်ရည်တွေ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ပန်းထုတ်လိုက်ချိန်မှာ မောင့်နှုတ်ခမ်းကို အားရပါးရ စုပ်နမ်းလိုက်ရတာကို သာယာယစ်မူးတတ်လာပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိမ်ညာထားတဲ့ အလိမ်အညာတွေကို စွန့်လွတ်လိုက်နိုင်တဲ့ အချိန်က ကျွန်မနဲ့မောင်ရဲ့ ပိုမိုပျော်ရွင်စရာကောင်းတဲ့ ဘဝခရီးသစ်ကို စတင်တဲ့အချိန်ပါပဲ။ပြီးး ခရဒစ်